VOHIDROTRA TOAMASINA II : Lahiantitra 60 taona nanolan-jaza 5 taona
Habibiana tsy roa aman-tany. Mbola mampiteny ny moana tanteraka ny resaka fanolanan-jaza amin’izao fotoana izao. 14 janvier 2021
Nahenoana trangana fanolanana indray tao amin’ny distrika Toamasina Faharoa tamin’ity herinandro ity. Lahiantitra efa 60 taona no voatondro fa nanolana zaza tsy manantsiny vao dimy taona monjna.
Tao amin’ny zana-tanàna antsoina hoe Analanjavôka fokontany Vohidrotra, Kaominina Antetezambaro Toamasina faharoa no nisehoan’izany habibiana izany. Tamin’ity herinandro ity no voasambotra ilay rangahy tompon’antoka.
Raha ny fanazavana voaray, ny alin’ny 31 desambra teo noho ny fitadiavana dia nitondra varotra teny amoron-dalana mba nanararaotra ny andro fety ny ray aman-drenin’ilay zazavavy antsoina hoe Vavisoa. Ity farany izay vao 5 taona monja. Napetraka tamin’ny mpiray tanàna izay efa nifampitondra mpirahalahy amin’ny rain’ilay zaza i Vavisoa sy ny anadahiny iray.
Ny marainan’ny taom-baovao 2021, hatairana ny an’ny ray aman-drenin’i Vavisoa fa nisy ra ny lamban’ilay zazavavy. Natao ny fanambatambazana nanontaniana ny tena zava-nisy, dia namoaka ny marina i Vavisoa.
Dadabe Raymond izay nampatory anay tamin’ny alina no nahatonga io ra io, hoy ilay zaza. Izy izay notambazany vola 300 Ariary. Nentina natao fizaham-pahasalamana tao amin’ny Centre Vonjy Hopitaly Be Toamasina avy eo, ka voamarina tokoa fa tena fanolanana no nahazo an’i Vavisoa ary efa intelo no nanaovan’ilay matoelahy 60 taona antsoina hoe Raymond firaisana ara-nofo tamin’ilay zaza.
Niaiky ny heloka vitany rahateo ity rangahy ity ary nilaza fa nataony tsimoramora fa tamin’ny fanintelony io vao tena naratrany tanteraka ilay zaza.
Ity nahavonan-doza sy ny rain’ilay zaza voaolana izay samy mpiambina trano lehibe eny amin’ny faritra Vohidrotra Antetezambaro ny asa fivelomany. Olona efa noheverina ho natokisana saingy nivadika biby tanteraka.